အသက် (၇၄)နှစ်ကျော်လာပြီဖြစ်ပေမယ့် ကျန်းမာနေ ဆဲ ပြည်သူ့အချစ်တော် လူရွှင်တော် ဦးမိုးဒီ. – XB Media & News
အသက် (၇၄)နှစ်ကျော်လာပြီဖြစ်ပေမယ့် ကျန်းမာနေ ဆဲ ပြည်သူ့အချစ်တော် လူရွှင်တော် ဦးမိုးဒီ.
အသက် (၇၄)နှစ်ကျော်လာပြီဖြစ်ပေမယ့် ကျန်းမာနေဆဲ ပြည်သူ့အချစ်တော် လူရွှင်တော် ဦးမိုးဒီ..
ပရိသတ်ကြီးရေ ဝါရင့်လူရွှင်တော်ကြီး ဦးမိုးဒီ ကတော့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကြာ ဇာတ်ကားပေါင်းများစွာကို ပါဝင်ရိုက်ကူးထားပြီးတော့ ပရိသတ် ကြီးကိုရယ်မောပျော်ရွှင်အောင် ပြုလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ ဝါရင့်သရုပ်ဆောင်ကြီးတစ်ဦးပဲဖြစ်ပါတယ်။
လူရွှင်တော်လောကမှာလည်း မော့စ်နဲ့ မိုးဒီ အတွဲပျက်လုံးတွေက နာမည်ကြီး ဖြစ်ပြီး ပရိသတ်တွေချစ်ခင်အားပေးရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ လက် ရှိ မှာ ဦးမိုးဒီ ကတော့ အသက် ၇၄နှစ်ရှိပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့မှာတော့ လူရွှင်တော်မိုးစက်က တောင်ဥက္ကလာမှာနေထိုင်တဲ့ ဦးမိုးဒီရဲ့နေ အိမ်ကို ရောက်ရှိနေကာ အလှူငွေတွေ ပေးအပ်ရင်း နှစ်ယောက်အတူ Live လွှင့်ပြီး ပရိသတ်တွေနဲ့ စကားပြောခဲ့ကြပါတယ်..။
ဦးမိုးဒီ ကတော့ မျက်လုံးတဖက်က သိပ်မမြင်ရတာကြောင့် ခွဲစိတ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ ပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့ ဦးမိုးဒီ က အခုအချိန်အထိ ပရိသတ်တွေကို ပြက်လုံးတွေနဲ့ရယ်မောအောင်ပြုလုပ်ပေးချင်သူပါ။ တစ်ခါတလေမှာတော့ သူ့ရဲ့တွဲဖက်တွေဖြစ်တဲ့ လူရွှင်တော်ကြီးဦးစိန်ရိုး၊ဦးမောစ်တို့ကို လွမ်းကြောင်းလည်း သိရပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ လူရွှင်တော်မိုးစက်နဲ့အတူ Facebook Live ကနေပရိသတ်တွေနဲ့ စကားတွေပြောခဲ့ကြပါသေးတယ်။ ဦးမိုးဒီကတော့ ချစ်ခင်အားပေးပြီး မတွေ့တာကြာပြီဖြစ်တဲ့ ပရိသတ်တွေနဲ့ စကားပြောပြီး လက်ရှိကျန်းမာအခြေအနေတွေကို Live လွှင့်ပြသလာတာဆိုလည်း မမှားပါဘူး..။
အသက်(၇၄)နှစ်ကျော်ပြီဖြစ်တဲ့ ဦးမိုးဒီ ကတော့ လက်ရှိမှာ ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်နေပြီး ပရိသတ်တွေနဲ့ ရယ်ရယ်မောမော ပျော်ပျော်ပါးပါး စကားတွေအပြန်အလှန်ပြောနေတာ တွေ့ရမှာပါ..။ ဦးမိုးဒီ ကတော့ အသက်အရွယ်ကြီးရင့်လာတာကြောင့် အနုပညာအလုပ်ကို ရပ်နားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အသက္ (၇၄)ႏွစ္ေက်ာ္လာၿပီျဖစ္ေပမယ့္ က်န္းမာေနဆဲ ျပည္သူ႔အခ်စ္ေတာ္ လူ႐ႊင္ေတာ္ ဦးမိုးဒီ..
ပရိသတ္ႀကီးေရ ဝါရင့္လူ႐ႊင္ေတာ္ႀကီး ဦးမိုးဒီ ကေတာ့ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုၾကာ ဇာတ္ကားေပါင္းမ်ားစြာကို ပါဝင္႐ိုက္ကူးထား ၿပီးေတာ့ ပရိသတ္ ႀကီးကိုရယ္ေမာေပ်ာ္႐ႊင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ခဲ့တဲ့ ဝါရင့္သ႐ုပ္ေဆာင္ႀကီးတစ္ဦးပဲျဖစ္ပါတယ္။
လူ႐ႊင္ေတာ္ေလာကမွာလည္း ေမာ့စ္နဲ႔ မိုးဒီ အတြဲပ်က္လုံးေတြက နာမည္ႀကီး ျဖစ္ၿပီး ပရိသတ္ေတြခ်စ္ခင္အားေ ပးရတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ လက္ ရွိ မွာ ဦးမိုးဒီ ကေတာ့ အသက္ ၇၄ႏွစ္ရွိၿပီပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကေန႔မွာေတာ့ လူ႐ႊင္ေတာ္မိုးစက္က ေတာင္ဥကၠလာမွာေနထိုင္တဲ့ ဦးမိုးဒီရဲ႕ေန အိမ္ကို ေရာက္ရွိေနကာ အလႉေငြေတြ ေပးအပ္ရင္း ႏွစ္ေယာက္အတူ Live လႊင့္ၿပီး ပရိသတ္ေတြနဲ႔ စကားေျပာခဲ့ၾကပါတယ္..။
ဦးမိုးဒီ ကေတာ့ မ်က္လုံးတဖက္က သိပ္မျမင္ရတာေၾကာင့္ ခြဲစိတ္ဖို႔အစီအစဥ္ရွိတယ္လို႔သိရပါတယ္။ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနတတ္တဲ့ ဦးမိုးဒီ က အခုအခ်ိန္အထိ ပရိသတ္ေတြကို ျပက္လုံးေတြနဲ႔ရယ္ေမာေအာင္ျပဳလုပ္ေပးခ်င္သူပါ။ တစ္ခါတေလမွာေတာ့ သူ႔ရဲ႕တြဲ ဖက္ေတြျဖစ္တဲ့ လူ႐ႊင္ေတာ္ႀကီးဦးစိန္႐ိုး၊ဦးေမာစ္တို႔ကို လြမ္းေၾကာင္းလည္း သိရပါတယ္။ ဒီေန႔မွာေတာ့ လူ႐ႊင္ေတာ္မိုးစက္နဲ႔အတူ Facebook Live ကေနပရိသတ္ေတြနဲ႔ စကားေတြေျပာခဲ့ၾကပါေသးတယ္။ ဦးမိုးဒီကေတာ့ ခ်စ္ခင္အားေပးၿပီး မေတြ႕တာၾကာၿပီျဖစ္တဲ့ ပရိသတ္ေတြနဲ႔ စကားေျပာၿပီး လက္ရွိက်န္းမာအေျခအေနေတြကို Live လႊင့္ျပသလာတာဆိုလည္း မမွားပါဘူး..။
အသက္(၇၄)ႏွစ္ေက်ာ္ၿပီျဖစ္တဲ့ ဦးမိုးဒီ ကေတာ့ လက္ရွိမွာ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ေနၿပီး ပရိသတ္ေတြနဲ႔ ရယ္ရယ္ေမာေမာ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး စကားေတြအျပန္အလွန္ေျပာေနတာ ေတြ႕ရမွာပါ..။ ဦးမိုးဒီ ကေတာ့ အသက္အ႐ြယ္ႀကီးရင့္လာတာေၾကာင့္ အႏုပညာအလုပ္ကို ရပ္နားထားတာပဲျဖစ္ပါတယ္။
ချစ်ရသူရဲ့ပုံရိပ်လေးကို အလင်းပြလာရင်း ေ-ာမ တယ်ဆိုပြီးစွပ်စွဲနေတဲ့လူတချို့ကို ထိထိမိမိတုန့်ပြန် လိုက်တဲ့ သရုပ်ဆောင် မြတ်သူသူ